Ukufundwa kwe-Semalt: ISOO njengeSikimu Esihlanganisiwe Sokukhangisa Idijithali
Amabhizinisi e-inthanethi adinga ukuba khona kwi-intanethi. Ngaphandle kwalokho, amaklayenti angabavakashela iwebhusayithi yabo ngephutha noma isifiso esijulile. Igama elisetshenziswe esitolo, i-logo yalo kanye nemikhiqizo inikeza ulwazi olungathintakumakhasimende ukuhlonza - umzugsplaner checkliste pdf. Ulwazi olufanayo luyisisekelo uma kuziwa kokubeka ulwazi olwenza ukuba khona kuwebhu kwe-ibhizinisi. Amawebhusayithi agciniwe anolwazi olulula ukukhetha, futhi amakhasimende amaningi angabathola ngomzamo ongaphansi.
Okuhlangenwe nakho kwe-intanethi okuseshweni lokukhishwa kwenyanga ezingu-13 billion. Ukusungulwa kweI-Search Engine Optimization (SEO) okuyinto ngokuyisisekelo i-website etholakalayo kulula isebenza njengendlela eyinhloko yokukhangisa kwe-digital ye-intanethiibhizinisi.
Nge-SEO, ibhizinisi lingadlulisela amaklayenti ayo kuwebhusayithi yayo ukuthola ukuthi yiniisayithi liba khona lapho ngokukhulisa inzuzo yenkampani. Lokhu kungafinyelelwa lapho i-firm ithola indawo ephakeme njaloikhasi lekhasi lokusesha injini. Ukukhangisa kwamahhala nokuchofoza nge-Pay ngezinye zezindlela ezingcono kakhulu eziphakanyisiwe.
u-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, inikeza izakhi ezibalulekile zokudidiyela okudidiyelwe kokukhangisa kwe-digital okuyinto yonke ibhizinisi e-inthanethi elidinga
Indlela i-SEO esebenza ngayo
I-SEO isebenzisa izinjini ezifuna ukukhamba, ukuskena, ukugcina izinkombafuthi ukwenza ukubuyiswa ngokusebenzisa ama-algorithms kanje.
1. Ubuningi begama elingukhiye:
Ukuphindaphinda kwegama elingukhiye kwandisa ukubaluleka kwekhasi elithile lewebhu.
Izinjini zokusesha zisebenzisa imethadatha yedokhumenti ye-HTML njengoba inikezwa ngamathegi we-Metahlola ukwaneliseka.
3. Iwebhusayithi Yokuqukethwe:
Okuqukethwe kwekhwalithi esebenzisa amagama angukhiye afanelekethisa abantu abaningi futhi ubaqondise kusayithi.
4. Izixhumanisi ezingenayo:
Ama-Hyperlink kwamanye amawebhusayithi afaka kwiwebsite anikeze izinga eliphezuluindawo yesitimela esengeziwe.
Ulwazi olumayelana nokukhomba, ukukhahlela, i-Search Engine I-algorithms, nokuthola ukunikezaukuqonda okuningiliziwe kokusebenza kwe-SEO.
Abakwa-Crawlers noma ama-Spiders yi-software ehambisa iwebhu ngokuhlelekile ukuze ilandeleukuhlinzeka ngokukhethwa okusheshayo nangempumelelo kwemininingwane kamuva ngezinjini zokusesha. Umkhumbi akahlolisisi ukubuyekeza mayelana ne-intanethiokuqukethwe nsuku zonke, kodwa kugcina izinkumbulo nokubeka kuhlu ekusesheni, ezilandelwe futhi ezivakashelwe izindawo zokucubungula ngokushesha ngezinjini zokusesha.
I-Spider yenza i-database yamakhasi okuqukethwe okwenziwe. Izinkomba eziyikhongokuyinhloko ulwazi olunikezela ulwazi mayelana namawebhusayithi namakhasi ewebhu aphethwe yinjini yokusesha. Ukubuyiswa kokuqukethwe kwe-anInkomba ikhona ngokusebenzisa amagama angukhiye kanye nezintambo ezihlobene. I-SEO kumele ibe yilelo uma injini yokusesha kufanele iqonde iwebhusayithi.
I-algorithms engxenyeni yosesho
I-Algorithm ye-Search Engine iqukethe amasethi amafomula ahlukile kanye nemithetho echazaukuhambisana kwekhasi lewebhu. Banokwazi ukukhomba ikhasi langempela noma ngabe okuqukethwe kwewebhu kunolwazi oluwusizo oludingekayo ngumsebenzisi.
Isigaba sokugcina senqubo yokusesha ye-SEO ephethwe ikhasi lewebhu yinkambinkimbi enzima ukuthikuhilela ukuqonda okuqukethwe okuseshweni nokulifanisa nezinkomba ezifanele kanye namaseva. Ekugcineni, injini yokusesha itholauhlu lwamadokhumenti afana namagama angukhiye kanye nesicingo esetshenziswayo.
Ukusetshenziswa kwe-SEO, ngakho-ke, kwenza kube lula ukuthola ulwazi oluthileiwebhusayithi ephezulu ekusesheni ukubuyiswa okulula nge-injini yokusesha. Isu lokuthengisa le-SEO libiza imali kakhulu njengoba libonisaukubonakala kwebhizinisi ekwenzeni i-e-commerce ngokulawula okuqukethwe kwamakhasi wewebhu wezinjini zokusesha.